Ubumba loLwandle: Isikhokelo esigqibeleleyo kunye nokuQokelelwa kwaBantu- iIkaro
yokuqalisa >> Uhlobo >> Udongwe LwaseLwandle
Ngobumba loLwandle siyaqonda zonke ezo ziqwenga zeceramic okanye iithayile ezinje ngeGlasi yeGlasi, zonakaliswa lulwandle, ngamachibi okanye imilambo, nangona eyona nto ixhaphakileyo kukuzifumana elunxwemeni. Ukuba awuyazi into Iglasi yolwandle jonga isikhokelo sethu.
Ngaphandle koBumba loLwandle bakwabiza ngokuba yiTyeware yaseLwandle. Andilazi igama ngesiCastilian, mhlawumbi inguqulelo yeyeseramikhi yaselwandle okanye iiseramikhi zolwandle, iiseramikhi zaselwandle ze-grés. Nakuphi na ukudibanisa kubonakala kufanelekile, kodwa ndicinga ukuba kwezi meko kungcono ukuqhubeka nokusebenzisa igama lesiNgesi.
Ayisiyo isihloko ekuxoxwa kakhulu ngaso kwaye asifumani lwazi kwi-Intanethi. Ewe, kukho iziqwenga ezikhoyo zokuthenga kwiindawo ezinje nge-Etsy okanye i-eBay, kodwa ababaninzi abantu ababonisa ingqokelela yabo okanye nayiphi na inzame yokuyibeka okanye yokuyibeka yesiqhelo.
Kuyandothusa xa kwezi zinto zincinci zenziwe ngomdongwe bayakwazi ukufumana eyona nto ibiyiyo kwaye bayisebenzise njengesixhobo sezinto zakudala ukuza kuthi ga ngoku kwaye baqonde ngcono imbali yemveliso yalapha. Bathetha ngokubaluleka okukhethekileyo kwiziqwenga ezifumaneka kwi amachibi amakhulu. Apha eSpain, ngakumbi kwindawo yam, kufutshane kakhulu nabavelisi abakhulu bolu hlobo lwezinto, ndicinga ukuba ukuchongwa kwezinto zakudala ngekhe kube lula.
Ukwahlula kunye neentlobo
KuMbutho weGlasi yeGlasi bathetha ngokuhlela ngokobuninzi bobushushu kunye nokudubula kwiodongwe:
Izitya. Ubushushu obuphantsi bokudubula obukhokelela kwimathiriyeli engaphantsi kunye eshinyeneyo.
Ilitye. Ubushushu obuphezulu bokupheka. Izinto ezingenayo i-porous, encinci kwaye icwecwe kodwa ayinayo imbonakalo vitreous njenge porcelain
Udongwe. Ubushushu bokupheka obuphezulu. Inzima kakhulu kwaye i-vitreous, imhlophe ngombala.
Ngokuba nemizobo, iipateni ezahlukeneyo kunye nemibala, iziqwenga ezintle kakhulu nezinomdla zishiyekile zinemiphetho ejikelezileyo kunye neceram ecekeceke.
Ndiqalise ingqokelela encinci kuba ndiyakholelwa ukuba ungafumana iziqwenga ezinomdla kakhulu kunye nengqokelela yobuhle obukhulu.
Ndishiya ezinye iifoto zeziqwenga ezifunyenwe ukuza kuthi ga ngoku
Ndinethamsanqa lokuhlala kufutshane nonxantathu weethayile kwaye andazi ukuba kuyawenza umahluko na ukuba ndifumene iziqwenga "ezoneleyo" zoLwandle lwezoLwandle, ngaphandle kokuya kwiindawo ezishushu apho ndiqinisekile ukuba kuya kubakho okungaphezulu kwesiqhelo.
Ayiziziqwenga ezintle, kwaye andikaze ndithathe ezona foto zibalaseleyo (okwangoku) kodwa ngokuhamba kwexesha ndiqinisekile ukuba into ebhetele inokuphunyezwa. Injongo yam ngokuqokelela kukufumana izinto ezintle. Enye indlela yokusondela kuyo ubugcisa. Akukho Okuninzi.
Iziqwenga ze-porcelain zilahlekile, ezimhlophe ozibona kumfanekiso oqhelekileyo kuba zitshisiwe kwaye akukho nto inokubonwa efotweni. Ndiza kulungisa ibhokisi encinci ethambileyo ukuba neefoto ezintle.
Imithombo kunye nezixhobo
Kulo Umbutho weglasi yolwandle sinemizekelo emihle kakhulu.
Isikhokelo seGlasi yoLwandle i-Ikkaro
Ulwabiwo lweGlasi yoLwandle
Iglasi yoLwandle: Isikhokelo soMqokeleli
Indlela yokwenza amanzi adibeneyo
Yintoni i-LEGO Boost
Uyenza njani iplastiki kubisi okanye eGalalith
Ukusika jet kwamanzi
izigaba Uhlobo Ukuhamba kwetikiti
Imicimbi yobugcisa nguNeil Gaiman
1 ucinga nge «Pottery yaselwandle»
NgoSeptemba 15, 2021 nge-6: 12 am
Ixesha elidala lobumba lolwandle, iglasi yolwandle, kunye namatye ayigugu yezimbiwa njl. ingqokelela yam yobumba yolwandle inkulu kakhulu. Ndazi njani ukuba zazivela phi nokuba zixabisekile.
1 Ukwahlula kunye neentlobo
2 Ingqokelela yam
3 Imithombo kunye nezixhobo